IShetland Sheepdog Dog Inzala Imininingwane - Izinhlobo
Njengoba igama lisho, iShetland Sheepdog (“uSheltie”) ingeyomdabu eziQhingini zaseShetland, ezisolwandle oluphakathi kweScotland neNorway. Izwe lobuhle obuzwelayo, obuyinyumba, iShetland nezakhamuzi zalo sekuyisikhathi eside zivelele kakhulu ezinganekwaneni zaseYurophu.
Lokhu mhlawumbe kuchaza izindaba ezimnandi kakhulu ngemvelaphi kaSheltie, njengombono wokuthi ekuqaleni zazibizwa ngokuthi 'izinja zezinganekwane,' noma umbono wokuthi lolu hlobo lwakhiwa yiPicts yangaphambi komlando.
Eqinisweni, iShetland ikweleta i-aura yayo enenkungu emhlabeni ngenxa yeziphepho ezingapheli ezikhukhula iNorth Atlantic. Njengoba inhlabathi engaphezulu kanye nohlaza kusongelwa njalo ukuguguleka kwenhlabathi, abaseShetlanders besebenzisa umnotho kuzo zonke izinto.
Amaphoni nezinkomo ezincane nezimvu ezibaluleke kakhulu emiphakathini yabomdabu zavunyelwa ukuba ziklaba ngokukhululeka, kuyilapho izilimo ezimbalwa ezazitshaliwe zazivikelekile ezingadini ezibiyelwe “ngamazwane” amancane (kusukela kushunqa saseNorway esithi “ipulazi”).
Kodwa-ke, lezi zindlela ezimbili zokuziphilisa zazivame ukungqubuzana lapho izilwane zaseShetland ezingaconsi phansi zigxuma izindonga zamatshe zizitika ngamahlumela amathenda akhula ngaphakathi.
I-American Sheltie Namuhla
Ukuthenga nokubhalisa i-Sheltie yakho
Ama-Shelties Kwamanye Amazwe
Maphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye, abantu baseziqhingini ababedlile baqala ukufuya izinja ezincane ezisheshayo abazibiza ngokuthi 'ama-toony,' ukuvikela amaponi nezimvu ngaphandle kwezitshalo zabo eziyigugu. Kuncane okwaziwayo ngozalo lwezinja.
Inja yezimvu yangaphambilini, enkulu yaseShetland, ama-collies ahlukahlukene asebenzela eBrithani, i-Icelandic Yakkie, kanye nama-spaniels amancane ezwekazi kungenzeka ukuthi banikele ngezakhi zofuzo, kodwa akukho okubhaliwe ngomlando wamaShelt kuze kube sekupheleni kwekhulu leminyaka.
Cishe ngonyaka we-1890, abathandi bezinja baseBrithani batatazeliswa yimibiko yokuthi izinombolo ze-Toonies zazincipha. Abasolwandle bemikhumbi ye-whaling babike ukuthi bathathe abaningi bayosebenza njengezinja zemikhumbi, noma njengezipho zabathandekayo ekhaya, futhi izinguquko emnothweni weziqhingi zazenza ezinye izinhlobo zezinja ezelusayo zibaluleke kakhulu.
Ngalesi sikhathi, abafuyi baseScotland nabaseNgilandi baqala umsebenzi 'wokugcina nokuhlanza' izinja ezincane zaseziqhingini, kepha cishe ngokushesha, kwavela umehluko omkhulu phakathi kwabo. Abanye bebefuna ukuqhubekisela phambili izici zezinja ze-crofters, ezichazwe encwadini ethile yosuku njenge-10-11 ″ ende, enesisindo esingu-6-10 lbs, 'enhle, ehlakaniphile futhi eqinile.'
Abanye, noma kunjalo, babheka ama-toony njengama-mongrel nje, futhi abadinga ukucwengwa okukhulu.
Leli qembu lokugcina lalifuna ukuqinisa lokho elalibona kuyizici ezinhle kakhulu zamaToyon ngokuwawela ngeCollies encane enokhahlo, umkhuba owamukelwa ngaleso sikhathi yiKennel Club. Lezi “ziphambano ezamenyezelwa” zaveza inja ethe xaxa, eyayibizwa ngokuthi iShetland Collie.
Imizamo eyalandela yokubuyisa usayizi wezinja ngeziphambano ezikhethiwe ezinohlobo lwamathoyizi kwaholela ekulahlekelweni kohlobo lukaCollie futhi ngokushesha yalahlwa.
IKennel Club yathola iShetland Collie ngo-1909, kwathi ngonyaka olandelayo ummeleli wokuqala wohlobo olusha wabhaliswa kwiAmerican Kennel Club. Ngo-1914, ukuthola iziphikiso zabathandi beCollie, iShetland Collie yaqanjwa kabusha ngokusemthethweni ngokuthi iShetland Sheepdog.
Ukuvinjelwa kokuzalela iMpi Yezwe I eBrithani kuyibuyise kakhulu intuthuko kaSheltie, kepha ngemuva kokuba isusiwe, abathandi bezinto zaseMelika baqala ukungenisa amaShelties amaningi, kwathi ngo-1929, abathanda abanele base-U.S. I-ASSA izobamba umbukiso wayo wokuqala okhethekile ngo-1933.
Ukungeniswa okuvela eNgilandi kwaqhubeka kwaze kwaba ngawo-1950 lapho amaShelties aseMelika nawaseBrithani eqala ukwehluka kakhulu ngohlobo. Lokhu kungenzeka kubangelwe iziphambano zikaCollie eU.S. ezihlala zingenawo amaphepha amaningi (Ngokungafani neKennel Club yaseNgilandi, i-AKC ibilokhu yenqabela ukuzalanisa.)
Kungabangelwa futhi ukuthi indinganiso yesiNgisi sekuyisikhathi eside imemezele ukuphakama okufanelekile kuwo wonke amaShelties (14 ″ ama-bitches; 14.5 ″ wezinja), kanti indinganiso yaseMelika ayinikeli noma yikuphi ukuphakama phakathi kwamayintshi ayi-13 kuye kwayi-16.
(Ngaphambi kokwamukelwa kwezinga lamanje ngawo-1950, ompetha base-American Sheltie babengaba bude obungu-18 ″). Namuhla amaShelties avela kula mazwe womabili ahluke ngokugqamile, kanti i-U.K.-U.S. ukungenisa ezweni akuvamile.
Ngenkathi izinombolo zikaSheltie zanda ngesizotha e-United States, kwaphela iminyaka eminingi zihlala zingaziwa kakhulu kunabazala bazo bakaCollie. Ekupheleni kweminyaka yama-1970, nokho, isimo sase siguqukile, kanti iShetland Sheepdog yavela ohlwini lwe-AKC lwezinja eziyishumi ezaziwa kakhulu eminyakeni eyishumi nambili eminyakeni eyishumi nanhlanu ezayo.
Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1990, ukuthandwa kukaSheltie kwase kukhuphukile, futhi izinombolo zokubhalisa zaqala ukwehla. Ngo-1992, abakwaShelt babengabazalanisi abangu- # 9 be-AKC nababhaliswa ngazinye abangama-43 449. Ngo-1998, abakwaShelties babekwe endaweni engu- # 15 ngokubhaliswa ngakunye okungu-27,978.
Umbala wejazi / ukumakwa
Ngokwezinga elithile, impikiswano yokuthi yiziphi izici ezizobusa iyaqhubeka e-U.S. Namuhla. Lokhu kubangela ukwehluka okukhulu kakhulu kunalokho okuphakanyiswe yi-AKC Standard.
AmaShelties aseMelika eza ngobukhulu obuhlukahlukene. Abafuyi bezilwane abakwazi ukuthatha amalebula ngokoqobo kakhulu atshela ukuthi kungakanani okufanele usuthise iSheltie, amashadi ahlinzeka ngezisindo ezifanele zezinhlobo ezahlukahlukene, noma ngisho nezikhangiso zamakhreyithi athi “Sheltie-sized” nezinye izinto.
Ngenkathi ama-Shelties kufanele alinganise phakathi kuka-13-16 the emahlombe, iningi lingaphezu kuka-14 ″, futhi ukugcina izinja zazo “ngosayizi” kuyinselelo engapheli kwabanye abakhiqizi. AmaPet Shelties aziwa ukuthi afinyelela kuma-20 ″ noma ngaphezulu futhi anesisindo esingaphezulu kwama-40 lbs.
Ngasikhathi sinye, ama-Shelties amancane angaphansi kuka-13 ″ asabonakala ngezinye izikhathi. Lokhu kwehlukahluka kuveza amagama adidayo. Izikhangiso zamaphephandaba zihlala zidayisa 'ama-toy collies,' 'ama-collies amancane,' 'ama-mini-Lassies,' noma ngisho 'nezindawo zokuhlala amathoyizi.' Azikho izinhlobo ezinjalo ezikhona. USheltie uyiSheltie, kungakhathalekile ukuthi ungakanani.
Ukuphakama kukaSheltie akukhombisi impilo, umsindo noma ubumnene bayo. Noma kunjalo, abangahle babe ngabanikazi bezilwane bangakhathazeka ngokufanele ngosayizi. Umthombo wakho omuhle kule ndaba ungumfuyi onolwazi.
Zombili ubukhulu obungaphezulu (ngaphezulu kuka-16 ″) nezincane (ngaphansi kuka-13 ″) izinja zingavela kudoti ofanayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lapho udoti uzalwa ngumuntu ongafundile, oswele ulwazi olusebenzayo lwezakhi zofuzo, okholelwa ukuthi bangakwazi “ukulinganisa” usayizi ngokuhlanganisa iSheltie enkulu nentwana.
Ngaphezu kwalokho, imigqa ehlukene yakwaSheltie ivuthwa ngamanani ahlukene, kanti umdlwane omkhulu emasontweni ayisithupha kungenzeka ungabi mkhulu ezinyangeni eziyisithupha. Umfuyi onedumela elihle, otshalile iminyaka yokufunda lonke uhlobo kanye nolayini wabo, uzohlinzeka ngesilinganiso esihle kakhulu mayelana nosayizi onikezwa umdlwane ozofinyelela ekuvuthweni.
AmaShelties anemibala ehlukahlukene. Yize izakhi zofuzo, kunemibala emibili kuphela yejazi likaSheltie - omnyama nonsundu - amagama amaningi asetshenziselwa ukuchaza izithunzi ezahlukahlukene zikaSheltie.
Saber . AmaShelties anombala onsundu noma onsundu, anamajazi asukela kukalamula ophaphathekile noma ujinja nge-mahogany. Ezimnyama imvamisa zinezinwele ezimnyama zokuqapha phezu kombala onsundu. Lokhu kubizwa ngokuthi “ amasabuli anemithunzi ”Noma“ ama-saber anezinto ezintathu . '
Amanye amasabula, akhanyayo futhi amnyama, anombala obomvu emajazini awo, yingakho igama elithi ' amasabomvu abomvu . ” Amashebula ngokuvamile anomaka amhlophe, kepha lokhu kungahle kusuka kokuvelele kakhulu kuye cishe kokungatholakali.
Ngaphandle kokubheka inani labamhlophe, noma inani labadlali abamnyama noma ababomvu, wonke amaShelties ansundu kufanele abhaliswe ne-AKC njengama-sables.
Mnyama . Ama-Shelties abhaliswe ne-AKC njenge imibala emithathu lapho zinokumakwa okumhlophe nokushuna, futhi njengoba abamnyama lapho zimakwe ezimhlophe kuphela. Lapho amaShelties amnyama enesigaxa esenziwe ngethusi engubeni yawo, lokhu kubizwa ngokuthi “ukugqwala.”
Ukugqwala (okuvame ukukhushulwa ukuvezwa yilanga) kuyiphutha eringini lombukiso, kepha akunakuthinta neze inani likaSheltie njengesilwane esifuywayo noma inja yokusebenza (isb. Lowo oncintisana ngokuqina, ukulalela, ukulandelela, ukufuya, njll.) .
IBlue Merle . Ama-Shelties yizinja ezimnyama zofuzo, umbala wazo wejazi ushintshiwe yi-gene merling. Lokhu kuzenza zibonakale sengathi ziyisiliva eli-dappled futhi limnyama, imvamisa zinamabala amnyama.
Ama-merles aluhlaza okwesibhakabhaka nawo ahlukile kwamanye amaShelties ngoba angaba namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka noma ansundu (noma elilodwa lalawo), noma amehlo ahlanganisayo, abonakala njengombala onsundu noluhlaza okwesibhakabhaka. Lokhu akubonisi noma yikuphi ukungaboni kahle.
Ama-merles aluhlaza okwesibhakabhaka abuye amakwe ngamanani ahlukahlukene amhlophe, futhi angahle noma angabi nawo umaka we-tan. Labo abangenakho ukumakwa kwe-tan babizwa Ama-bi-blues .
Kunezinhlobo ezimbili zamaShelties amhlophe. Olunye uhlobo yi- umbala omhlophe onekhanda . 'I-White factor' inquma ukubekwa uphawu kukaSheltie okubizwa nge- 'Dutch' noma 'Irish' (ukhololo omhlophe, ibhibhi, kanye nezinduku) ezihlotshaniswa neLassie kodwa ezingadingeki eringini lombukiso.
Ezinye izinja ezinezimfashini ezimhlophe zinezingalo nemilenze emhlophe, ukhololo omkhulu omhlophe, namahlombe nemilenze emhlophe qwa. Inja enjalo ingaba nomhlophe kakhulu emzimbeni wayo okusala “isihlalo” noma iziqeshana ezimbalwa zombala.
Ikhanda layo, nokho, aliqukethe okumhlophe ngaphezu kwanoma imuphi omunye amandla kaSheltie. (Lokhu kufana nalokho okubizwa ngokuthi ingxenye-umbala kwezinye izinhlobo). Njengamanje, i-AKC Standard ijezisa kanzima noma yimuphi umdlalo uSheltie ongaphezu kuka-50% omhlophe, okubavimbela ekutholeni izicoco.
ICollies emhlophe ephethwe ngemibala sekuyisikhathi eside yamukelwa eringini lombukiso, kanti abanye abashisekeli bokuphikisa bathi amaShelties amhlophe aphethwe ngemibala akufanele acwaswa eringini lombukiso. Kunoma ikuphi, laba abamhlophe abaphethwe imibala bajwayelekile ngokuphelele.
Bancintisana emidlalweni engeyona eye-AKC, kanti i-AKC iyabamukela ngokulalela, ngobuhlakani, nakweminye imidlalo ye-AKC. AmaShelties amhlophe anekhanda afaneleke ngokuphelele njengezilwane ezifuywayo.
Okufanayo kaningi kungashiwo ngalokho okuthiwa Izinyoni ezimnyama “eziphindwe kabili” noma ukuhlangana kwe-homozygous okungavela kuzaliswano lwe-merle-merle. (Imvamisa abazali bobabili bangama-blues, kepha kukhona nokuhlangana okungajwayelekile kwesable.
I-Sheltie color genetics inzima kakhulu, futhi akekho umuntu okufanele azame ukuzalanisa ngaphandle kokuqonda kahle konke okungenzeka.) I- 'merle kabili' imvamisa inomhlophe omningi ekhanda nasemzimbeni wayo.
Lezi zinja zivame ukuba yizimpumputhe, ngaphandle uma kuvela isiqeshana esimnyama phezu kweso, futhi singase sibe yisithulu ngaphandle uma kuvela isichibi esimnyama phezu kwendlebe. Zivame ukuba nenhliziyo nezinye izinkinga futhi futhi azinconywa njengezilwane ezifuywayo.
Abanye abafuyi abangathembekile bakhangisa ngalezi zithengiswa ngokuthi “amaShelties amhlophe angavamile” - umkhuba ongacabangi.
Ngaphandle komhlanganiso “ophindwe kabili” ochazwe ngenhla, amaShelties ayo yonke imibala enza abangane abenelisa ngokulinganayo. Akukho ukuxhumana phakathi kobumnene beSheltie noma ukuqeqeshwa nombala wayo wengubo. Yize ama-sables eqhubeka nokuthandwa ngumphakathi, abaningi abathanda ukuzalanisa bathanda ama-merles aluhlaza okwesibhakabhaka nama-tricolors
AmaPet Shelties angakhombisa ukwehluka okufanayo kwezinye izici. Abanye banokhakhayi olubanzi emuva nezindlebe ezisindayo zezinsika zokuqala zasemapulazini. Abanye banobuso obuncane, obunama-foxy nezindlebe ezihlabayo ezazivame phakathi kweziqephu zabo zokuqala zesiqhingi.
Amanye amaShelties akhiwe kahle futhi abukeka emuhle, kanti amanye akhishwe kakhulu, anamakhanda amade, izintamo kanye / noma imihlane. Ngenkathi iningi labantu likuthola okungenhla kuthandeka njenganoma yimuphi umpetha, kusho ukuthi isilwane sakho uSheltie singabukeka sihluke kakhulu kunaleso esisezansi komgwaqo.
Ngaphandle kwamajazi abo aminyene, amaShelties awafanelekile ukuhlala ngaphandle unyaka wonke, ngaphandle kwezimo ezipholile kakhulu. Kufanele njalo zivikelwe ekushiseni nasekubandeni okweqile. Ngaphezu kwalokho, ukudingida iSheltie egcekeni elingemuva, isibaya noma igumbi elingaphansi kunesihluku.
AmaShelt yizilwane ezijwayelene futhi azonda ukuhlukaniswa nabantu bawo. Labo abazizwa belahliwe kalula bangaba nezinkinga zokuziphatha ezilimazayo, njengokukhonkotha ngokweqile, ukuhlafuna noma ukumba.
Ngakolunye uhlangothi, awudingi ukuvumela uSheltie agijime endlini lapho ungasekho. Umhlobo lo unamandla wemvelo wokujarhisa, begodu angaqeqeshwa msinyana ukuhlala ekhreyithini. (Lokhu kuthatha isikhathi, noma kunjalo, ngakho-ke ungathengi ikesi futhi ulindele ukuthi inja izohlala ngokujabula kuyo ngosuku lokuqala!)
Amakhreyithi nawo awusizo olukhulu ekugqekezelweni kwezindlu futhi azogcina ingane yakho ingadli izintambo, njll. Lapho isithukuthele.
Ngenkathi amanye amaShelties ehleli phansi futhi ejabulela impilo ethule, amaShelties amaningi anamuhla anezidingo zokuvivinya umzimba eziphakeme kakhulu. Abanye ochwepheshe batusa ukuhamba amakhilomitha amabili nsuku zonke. Izindawo zokuhlala zivame ukuthatha injabulo enkulu emidlalweni enjengokulalela, i-fly-ball, i-Frisbee, ukufuya, ukushesha nokulandela umkhondo.
Kodwa-ke, yize uhlobo lunerekhodi elihlaba umxhwele lokuphumelela kule misebenzi, akuwona wonke amaShelties akhelwe ukusebenza, futhi abathandi bezemidlalo bangadinga ukunakekelwa kakhulu kunezinhlobo ezithile ukuqinisekisa ukuthola ithemba elihle lokuncintisana.
Njengoba kusikiselwe ngenhla, amandla kaSheltie nawo ayahluka, futhi lokhu kungabaluleka kakhulu kumnikazi wesilwane. Ama-Shelties enza uphawu lwezilwane ezifuywayo ezinothando futhi ezihlakaniphile, azibophezele ngokuqinile kubantu / kubantu abaphambili.
Ngokuvamile futhi bangabalindi abasebenza kahle emakhaya, futhi labo abakhuliswa ngezingane ngokuvamile baba izinja ezinhle zomndeni. Njengoba kunesifiso esinamandla sokujabulisa, abakwaShelties bayazwela futhi baphendula kahle ekuphatheni nasekuqeqesheni okuncane kodwa okungaguquguquki.
Cishe kubantu ongabazi, lo mhlobo uvame ukuchazwa njengobekelwe eceleni, yize amanye amaShelties anamuhla ebingelela abantu angabazi ngomdlandla. Uma bembalwa abasabonisa inhloni okwakuyiphutha lokuqala lohlobo, uhlobo oluchazwe yizincwadi ezindala (kanye nesiNgisi) zakwaSheltie njengokuqukethwe ukuhlala ekhaya eziko, ukubonga ukuhamba ntambama kuphela, nakho kuyindlala kunalokho kwake kwaba.
AmaShelties amaningi aseMelika manje anobuntu obunomsindo 'wohlobo lwe-terrier': izinja ezinomoya onamandla, kwesinye isikhathi ezinenkani, ezinamandla amakhulu, zidinga ukugcinwa zimatasa.
Ngenxa yalokhu, ukukhetha uSheltie ofanele kuyinselelo enkulu kunokuba abantu abaningi besola. Musa ukuwa ngobuso bokuqala obuyinkimbinkimbi ohlangana nabo. Ufuna inja ezolingana kahle nesimo somndeni wakho nendlela ophila ngayo.
Ukulalela okuphelele noma ithemba lokwelusa kungaba yiphupho elibi kumuntu ohleli phansi, kuyilapho isithandwa esithobekile somhlalaphansi singase sihlupheke ngokudabukisayo emndenini wezingane ezineminyaka engaphansi kwentsha.
Uma ufuna izinsizakalo zomfuyi ongumakadebona, uzobuza imibuzo eminingi ukuze enze umdlalo ongcono kakhulu ngezidingo zakho ezithile. Lokhu kungenye yezinzuzo zokubhekana nomfuyi wokuzilibazisa onomthwalo wemfanelo.
Ngemuva kwakho konke, ukuthola inja kuyisiphakamiso sempilo yonke. Ngenhlanhla nokunakekelwa okuhle, uSheltie wakho kufanele abe nawe iminyaka eyishumi nambili noma ngaphezulu (abanye basindile baze baba ngamashumi amabili!) Futhi kufanelekile ukutshala isikhathi esithe xaxa, umzamo nemali ekuqaleni ukuyithola kothile ozokusiza thola inja ekufanele.
Ngenkathi abakwaShetland Sheepdogs banezimfanelo eziningi ezijabulisayo ezibenza babe abangane abazuzisayo, banezici ezimbili ezinganikeza ikhefu kulabo abangaba abanikazi bezilwane. Ziyachitha futhi ziyakhonkotha. Ngaphambi kokuthola iSheltie, cabanga ngokucophelela ukuthi uzimisele yini ukuthatha imithwalo yemfanelo ekhethekile ehambisana nalokhu.
ISheltie iyinhlobo efakwe kabili futhi idinga okungenani ibhulashi elilodwa ngesonto ukugcina inhlanzeko nempilo. Ngesikhathi samasheya, ukunakwa nsuku zonke kuyadingeka. Iningi labantu abadala, eline-neutered noma elichithekiwe lifaka ijazi kanye ngonyaka.
Lapho izingane 'zishaya' ijazi lomdlwane wazo, kubonakala sengathi kunoboya kuyo yonke indawo, kepha lokhu kwenzeka kanye kuphela. Ngokuvamile, izinja (abesilisa) zinamajazi asindayo kunama-bitches, futhi-ke lapho kukhula khona uSheltie omdala, ijazi lizoba lukhulu.
Ama-bitches angakhokhelwa akholisa kakhulu, achitha ngomjikelezo ngamunye wesizini, kunokuba kube minyaka yonke - impikiswano eyodwa yokuthi owesifazane wakho alungiswe ngokushesha okukhulu. (Ama-Bitches futhi alahlekelwa yingubo yawo eningi ngemuva kukadoti ngamunye. Ungadumali uma idamu le-pup yakho libonakala ligqoke kahle. Isilwane sakho esilahlekile noma esingenalutho uSheltie akudingeki abukeke enjalo nqunu!)
Enye inselelo yokuba noSheltie ukuthi bangabakhonkothi abaziwayo. Ngokwezinga elithile, lokhu kuyehlukahluka kumuntu ngamunye, kepha njengohlobo, baziwa njengezwi. Futhi ngokungafani nezinye izinhlobo ezincane ezikhonkothayo kodwa ezinamazwi “ezingane,” abakwaShelties banegxolo elingene kakhulu.
Omakhelwane bakho bangase bangalijabuleli iqiniso lokuthi okhokho bezinja zakho babehlala eduze nolwandle, futhi kwakudingeka bazenze bazwakale phezu kwegagasi elishayisanayo, ukubizwa kwezilwane zasolwandle, ukukhala kwamawundlu, nokuhhewula komoya omkhulu.
Qeqesha uSheltie wakho kusenesikhathi ukuthi ayeke ukukhonkotha uma usuthole ukuthi akukho okumele ukhathazeke ngakho. Uma ungaqiniseki ukuthi ungakwenza kanjani lokhu, cela umfuyi wakho noma udokotela wezilwane igama lomqeqeshi ohloniphekile.
Ama-Shelties amabili noma ngaphezulu angaba seduzane nokungenakwenzeka ukuthi athule, yingakho abanikazi abaningi be-multiple-Sheltie benenye yezinja zabo zikhonkotha. Ungahle ufune ukuxoxa ngale ndlela nomfuyi wakho noma udokotela wezilwane futhi.
Izinga “liyipulani” ebonakalayo yohlobo. Ichaza ukubukeka komzimba kanye nezinye izimfanelo ezifunwayo zohlobo oluthile olwaziwa njenge uhlobo .
Ezinye izici, njengosayizi, ikhwalithi yengubo, nokunyakaza, zisuselwa emsebenzini woqobo (noma wamanje) wenja.
Ezinye izici ziyizimonyo kakhulu njengombala wamehlo, kodwa uma zihlanganisiwe zihlukanisa lolu hlobo ngaphandle kwazo zonke ezinye. Izinga lichaza i ekahle omele uhlobo. Ayikho inja engaphelele, kepha Izinga linikeza umfuyi ithuba lokuthi aphokophele kulo.
Ngenxa yokukhathazeka nge-copyright ngokuqoqwa kwawo wonke amaZinga kunoma iyiphi isayithi eyodwa egcina wonke ama-FAQ, amaZinga we-AKC awafakiwe kuma-FAQs e-Breed Umfundi udluliselwa ezincwadini ezisekugcineni kwalo mbhalo noma ku-National Breed Club ikhophi yeZinga.
Ngokudabukisayo, eminyakeni yamuva nje, ukuthandwa okwedlulele kwabayishumi kwavumela izinkinga eziningi zokuzalwa / zofuzo ukuba zande kulolu hlobo olusempilweni olude. Ngenhlanhla, ukuhlolwa kungakhomba okuningi kwalokhu ngaphambi kokuba kudluliselwe, futhi i-ASSA yenza lukhulu ukuxhasa ucwaningo kwezinye zezifo ezithinta kakhulu lolu hlobo.
Olunye uphawu lomfuyi oziphethe kahle ngukuthi bazobe behlole yonke imfuyo yabo (a) isifo samehlo, eShelties okubandakanya iProgressive Retinal Atrophy (PRA), Central PRA (CPRA), Collie Eye Anomaly (CEA) esibizwa nangokuthi ISheltie Eye Syndrome (SES), neCorneal Dystrophy (CD); (b) von Willebrand’s Disease (vWD) nezinye izifo zokopha ezifa; (c) I-Canine Hip dysplasia (CHD), kanye (d) nesifo se-thyroid, esiseShelties esixhunyaniswe nezinye izinkinga zezokwelapha.
Ngaphambi kokufuywa, womabili ama-bitches nezikopelo kufanele zibhaliswe neCERF (iCanine Eye Registration Foundation, ebala izinja ezingenaso isifo samehlo ngonyaka odlule) futhi zisuswe yi-OFA (Orthopedic Foundation for Animals).
Ngaphezu kwalokho, kufanele bahlolwe kokubili i-thyroid ne-vWD. Qaphelani abalimi abangenakukhathazeka, noma labo abahlole inja eyodwa ngakho-ke bathi bazi zonke izinja zabo 'bacacile.'
Maye, ezinye izifo ezizuzwe njengefa ezitholakala kwaShelties ngalesi sikhathi azikwazi ukubonakala kalula: isithuthwane (i-canine seizure disorder); izimo zesibindi, izinso namanyikwe; izinhlobo ezimbili zeLupus; izifo eziningana zesikhumba, kanye nomdlavuza wesikhathi esithile kubikwe ukuthi uthinta ngokungenakulinganiswa eminye imigqa.
Muva nje izifo ezizimele zomzimba ezifana ne-Inflammatory Bowel Disease zibonakala ziba yinsakavukela. Bheka i-Usenet Collie FAQ ne-Canine Medical Information FAQs ukuze uthole ingxoxo eyengeziwe, kanye nencwadi yezinkinga zezokwelapha yaseSheltie esigabeni Semithombo Yolwazi elandelayo.
Ngaphambi kokuba uthenge umdlwane, buza njalo umfuyi nganoma yiziphi izinkinga ezitholakala kulayini wazo. Abazalisi abaphika ubukhona bezinkinga zokwelashwa zikaSheltie abathembekile: thenga kwenye indawo.
Umfuyi onedumela uzohlinzeka ngesiqinisekiso esibhaliwe ngempilo yomdlwane futhi uzofuna ukwazi ngokushesha nganoma yiziphi izinkinga zezokwelapha ezivela.
I-Heartworm isibe yinkinga kazwelonke, futhi odokotela bezilwane abaningi bancoma ukuvikela inja yakho ngohlobo oluthile lwemithi yokuvimbela ehlinzekwa njalo. Kodwa-ke, amanye amaShelties, amaCollies, nezinhlobo ezihlobene nawo kubonakala kunokuzwela okungajwayelekile ku-Ivermectin, isithako esisebenzayo esivikelweni esithandwayo sanyanga zonke senhliziyo okuthiwa yi-Heartguard.
Ngenkathi amanye amaShelties ethathe lo mkhiqizo iminyaka ngaphandle kwesigameko, iningi lishonile ngemuva kokuwuthatha, ngakho-ke ukwelulekwa kuyalulekwa kakhulu. (Umkhiqizi wayevame ukufaka isexwayiso ngephakeji ngalinye le-Heartguard mayelana nokusisebenzisa kuma-Collies nezinhlobo ezihlobene kepha usanda kuyeka ukwenza kanjalo.)
I-Interceptor yemithi yanyanga zonke, enesithako esisebenzayo i-milbemycin, yenzelwe izinhlobo ezizwelayo ze-Ivermectin, futhi manje sekunezinye izindlela zokuvimbela imisundu yenhliziyo ezingenayo i-Ivermectin emakethe.
Njengoba kusikiselwe ngenhla, ukuthola umfuyi onokwethenjelwa ongathenga kuye uSheltie wakho kubaluleke kakhulu, futhi akulula ngaso sonke isikhathi. Abalimi abaningi abahloniphekile abakhangisi emaphephandabeni, futhi bambalwa abangathumela izaziso zomphakathi mayelana nodoti otholakalayo.
'Abafuyi bezindlu ezisemuva,' abashadisa izilwane zabo ukuze bathole imali ethe xaxa, banikeze abangane nezihlobo izilwane ezifuywayo, noma bafundise izingane zabo 'ngesimangaliso sokuzalwa' kungenzeka kube nezinhloso ezinhle, kepha abazi okuncane ngesayensi (kangako ubuciko) bokukhiqiza izinja ezihlanzekile ezingapheli.
Azinikezeli iziqinisekiso ezibhaliwe zezinsana zazo, futhi ngeke zitholakale ngokuhamba kwesikhathi ukuze zisebenze njengezinsizakusebenza. Ukuthenga kumfuyi onomthwalo wemfanelo kusho ukuthi uzoba nomuntu ongaphendukela kuye kuyo yonke impilo yenja ozoqhubeka nokuba nentshisekelo enhlalakahleni yayo futhi akulungele ukunikeza izeluleko.
Indlela yakho enhle yokuthola umfuyi onenkathalo ngokusebenzisa iklabhu yekennel yasendaweni yonke, iklabhu yangakini iSheltie, noma izinsizakalo zokudlulisela abakhiqizi be-American Shetland Sheepdog Association.
Uma ubhala isheke kumfuyi onjalo, awuyikukhokhela nje umdlwane. Futhi uthenga ukufinyelela eminyakeni yokuhlangenwe nakho komfuyi, ucwaningo olunzulu lozalo abalwenzayo ngaphambi kokuzala ngakunye, kanye nesiqinisekiso esivela ngokuhambisa zombili inhlabamkhosi nedamu, hhayi nje kuphela ukuhlolwa kwezivivinyo ezibanzi kakhulu, kepha ukwahlulelwa kwe-AKC amajaji nezinye izazi zohlobo.
Unenkontileka yezinsizakalo zochwepheshe, ozokunikeza izeluleko nolwazi eminyakeni ezayo, futhi ngubani ngezikhathi ezifanele ongakudlulisela kunethiwekhi yabantu abanolwazi: abanye abalimi, amajaji, abaqeqeshi, ongoti bezilwane, njll.
Ukuchitha nokungathathi hlangothi
Umfuyi ophethe kahle uzogcizelela ukuthi ingane yakho ichithwe noma ingasuswa. Lesi yisinyathelo esibalulekile ekuvikeleni impilo yomdlwane wakho. Izinzuzo zokuthi inja yakho 'ilungiswe' ziningi. Uzoba nezikweletu eziphansi ze-vet.
Isilwane sakho sasekhaya ngeke sithande ukweqa uthango lwakho bese usuka ngomgwaqo. Inja izokhipha kancane. Angeke abe khona amathuba okukhulelwa okungafunwa. Kepha mhlawumbe okukholisayo kakhulu, ukuchitha nokungenisa kwehlisa amathuba abo okuthola eminye imidlavuza.
Amathuba abesifazane okuthuthukisa umdlavuza we-mammary akhula kakhulu nge-estrus ngayinye; labo abachitheke ngaphambi “kwenkathi” yabo yokuqala bavikeleke kangcono kulesi sifo esesabekayo.
Futhi izinja ezingenayo i-neutered young ngeke zibe nethuba lokuthola umdlavuza wamasende lawo abakwaShelties besilisa abonakala bethambekele kuwo lapho beshiywa beqinile (Bheka uhlu lwezinkinga zezokwelapha ngezansi).
Imishini yokugaya imidlwane / Isitolo sezilwane
Ngaphezu kwakho konke ungathengi i-pup kumfuyi wezentengiso noma komunye wabathengisi babo. Laba bafuyi bakhulisa imidlwane “ezigayo” noma emapulazini, lapho abantu abadala benakekelwa kancane (imvamisa ngaphansi kwezimo ezimbi) futhi begcinwa emakhejini ezimpilweni zabo zonke.
Ama-bitches akhiqizwa kuyo yonke imijikelezo. Abaningi abakaze bagonywe. Amantshontsho awalokothi athole ukuhlangana komphakathi okubaluleke kakhulu kusuka emadamini nakubantu abalahla udoti - bayasuswa besebancane kakhulu ukuze bakwazi ukuthunyelwa banqamule izwe futhi bafakwe emafasiteleni ezitolo zezilwane noma ezindlini zezimboni eminyakeni yabo ekhanga kakhulu.
Eziningi zalezi zinezinkinga (zomzimba, ezentukuthelo noma zombili) ezizobonakala kamuva kuphela empilweni. Iningi lizoba nokufana okudlulayo kubamele abaphambili bohlobo.
Noma ngabe unenhlanhla futhi uthole iphuphu lesigayo se-puppy eliphilile futhi elilungisa kahle, uzobe ube nesandla kumjikelezo wokuhlukumeza ogweba abazali babo empilweni yokuhlupheka.
Lapho uthola ingane yakwaSheltie, kufanele unikezwe i-AKC “isiliphu esiluhlaza okwesibhakabhaka,” okufanele usibhalise ngaso. Uma ufaka lokhu nemali yokubhalisa, i-AKC izonikeza isitifiketi sokubhalisa esinenombolo eyingqayizivele ye-AKC yenja kuso. Gcina lesi silayidi.
Ungadinga imininingwane kuyo uma kwenzeka unquma ukufaka inja yakho kumncintiswano ogunyazwe yi-AKC, ukubhalisa i-tattoo noma i-microchip yayo (izindlela ezintsha eziphephe kakhudlwana zokukhomba izinja), noma ukudlulisela ubunikazi bayo ngokusemthethweni komunye umuntu.
Ukubhaliswa kwe-AKC kuqinisekisa ukuthi inkunzi yedamu nenja yakho kufakwe ezincwadini ze-AKC. Kodwa-ke, 'amaphepha' e-AKC awasona isiqinisekiso sekhwalithi, ubumnene, noma impilo.
Qaphela: ngomzamo wokwenza le FAQ ifaneleke kakhulu abafundi abangaphandle kwe-U.S., Nokunikezela ngombono wamazwe omhlaba ngabathandi baseMelika, lesi sigaba siyatholakala kunoma ngubani ozimisele ukunikela ngolwazi mayelana namaShelt ezweni labo.
Imininingwane izokwamukelwa ikakhulukazi kubathandi base-UK naseCanada. Okwamanje, ngibonga ngokukhethekile kuJohn De Hoog, ohambisa lo mbiko odalula ovela eJapan.
USheltie wokuqala oza eJapan “ngeziteshi ezisemthethweni” walethwa lapha ngo-1955 nguKameo Kido. Ngaphambi kokushiya i-U.S., UGeronimo Jackpot wayekhuliswe kuCh. UGeronimo Crown Prince. EJapan, wasiza omunye wesifazane.
UKido wabe esengenisa uGeronimo Prince Regent ukuba abe ngumlingani wakhe wesilisa. Ulayini weGeronimo awuzange wakhe kude kakhulu eJapan, noma kunjalo, futhi akusekho okuvela kulayini kwalethwa eJapane ngemuva kokuphuma kwabo.
AbakwaShelties abaphuma esibayeni sePage’s Hill bahambe kangcono kakhulu. Bangeniswa yisibaya saseGreen Hill seJapan Shetland Sheepdog Club (JSSC) futhi bafaka uCh. IStronghold O'Page's Hill, iqhawe lokuqala laseMelika laseSheltie elizolethwa eJapan.
UMnu uOhashi waseGreen Hill ungenise le nja ngemuva kocwaningo ngokucophelela lohlobo, wabe esengenisa ezinye izinja ezivelele kusuka kulo mzila, ngenkathi enza inqwaba yamaShelties aseJapan ahluke kakhulu kunalawo ayengaphambi kwayo.
Iningi lamanye amaShelties alethwe eJapan eminyakeni eyalandela aqhamuka ezindlini zezinja zaseMelika. Iningi lamaShelties manje aseJapan abhalisiwe ne-AKC. Ingxenye yesithathu ibhaliswe neJapan Kennel Club kanye nedlanzana nje (elingaphezu nje kuka-3 000) ne-English Kennel Club.
Okwamanje, abafuyi baseJapan bebelokhu bekhiqiza izinhlobo zabo, ezinye zithandeka impela. Njengoba i-AKC yenqaba ukwamukela noma yikuphi kwalokhu, kubhalisiwe esikhundleni sayo ne-JKC.
Umphakathi waseJapan washeshe wazithanda lezi zinja, kwathi ngeminyaka yama-1980 iShetland Sheepdog yaba uhlobo oluthandwa kakhulu eJapan. Inani lokubhaliswa kukaSheltie lafinyelela phezulu ngo-1988, lase liqala ukwehla. Ngo-1992 uSheltie wayeyinja yesithathu ethandwa kakhulu eJapane.
(AmaShibas amaningi nezinye izinhlobo zaseJapan zihlala zingabhalisiwe ezweni lakubo.) Kusukela ngaleso sikhathi ukuthandwa kwalolu hlobo kuye kwaqhubeka kwehla, kwehla endaweni yeshumi ngo-1997 kwaze kwaba ku-15 ngo-1998.
AmaJapane athambekele ekuthandeni okungaguquki uma kukhulunywa ngezinja. Ukubukeka nobumnene bukaSheltie nezingane kube nomthelela ekuphakamiseni kwabo kokuqala. Namuhla kunezingane ezimbalwa, futhi ukuthambekela kukaSheltie kokuzulazula ngenjabulo nokukhonkotha kakhulu kuyisimo esiqondile edolobheni elinabantu abaningi njengeTokyo.
Isithandwa samanje yiDachshund, ikakhulukazi ama-miniature anokubhaliswa okucishe kube ngu-60,000 kwe-JKC ngo-1998, kulandele uShih Tzu bese kuba nguGoldens. Noma kunjalo, iSheltie isizinzile njengohlobo olwaziwa kahle eJapan, noma ngabe imfashini yokuqala ifikile yadlula.
34 Ukuziphatha Okuhle Nokubi Kwenja Ejwayelekile
imibala ye-pomeranian mpunga
ibukeka kanjani i-rat terrier chihuahua
lab retriever ukuxubana kwegolide lokubuyisa
amagama athandwa kakhulu amlebhu emnyama